Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Kurume 02, 2021
Chirongwa chekubaya vanhu nhomba yeCovid-19 chiri kuenderera mberi hurumende ichiti vanhu zviuru makumi maviri nechimwe nemazana mana nemakumi mashanu nevatanhatu, 21456, vakanga vabayiwa nhomba iyi kusvika mukupera kwezuva nezuro.
Kusiya basa kwevaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika, VaKembo Mohadi, kwosimudza mutauro mukuru pamunhu achadomwa kuti atore basa rakasiyiwa naVaMohadi panguva iyo mazita evanhu vakawanda vanobva kuMatabeleland achitaurwa nezvawo pamusoro pechinzvimbo ichi.
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi dzinoti kumbovharwa kwenyika kwakaburitsa pachena kuti hurumende haina hurongwa hwakajeka hwekubatsira varombo kana paita dambudziko kunyange makurukota ehurumende aivimbisa kubatsira vanhu.
Sangano reAfrica Centers for Disease Control rinoti rine hurongwa hwekuona kuti vanhu bhiriyoni rimwe chete nemazana maviri emamiriyoni vari muAfrica vabayiwa nhomba yeCovid-19.
Muchirongwa cheThe Connection na8pm tiri kutarisa zviri kuitika munguva iyo pasi rose riri kurwisa chirwere cheCovid-19 uye zvinoreva kunyevenutswa kwemitemo inobata Covid-19.
Harare Agricultural Show Inovhurwa Iine Vanhu Vashoma Gore Rino
Varimi Vodhurirwa neMbewu neFotereza
Makwikwi eChibuku Super Cup Otanga neChitatu
Vanhu Vokurudzirwa Kunovhenekwa Kamwe Chete paGore naChiremba
ZITF Yotanga neChipiri Ichiti Vasina Kubayiwa Nhomba Kana Kuvhenekwa Covid-19 Havapinde